एक सय ११ दिनमा यस्तो बन्यो धरहरा, ४२ करोड सकियो, कहिलेसम्म बन्छ ? – osnepal tv
एक सय ११ दिनमा यस्तो बन्यो धरहरा, ४२ करोड सकियो, कहिलेसम्म बन्छ ?
काठमाडौं । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले काठमाडौंको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा सखाप भयो । त्यसपछि झण्डै ३ वर्ष कसले र कस्तो बनाउने भन्ने विवाद हुँदा धरहराको पुनर्निर्माण अन्यौल बन्यो । तर, अहिले भत्किएको धरहराकै ठूटोको आडैमा बन्न लागेको नयाँ धरहरा निर्माण भइरहेको छ । गत पुस १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेयता अहिलेसम्म झण्डै १२ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वसहसचिव तथा धरहरा पूनर्निर्माण विज्ञ समिति सदस्य राजुमान मानन्धरका अनुसार धरहराको जगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यस दौरान निर्माण कार्यमा चुनौती नआएका होइनन् । धरहरा क्षेत्रमा बिछ्याइएका खानेपानीका पाइप, ढल, टेलिफोन र विद्युतका तारले पनि काममा ढिलासुस्ती भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अब बन्ने धरहराको क्षेत्र समेत बिस्तार हुँदैछ । आडैको गोश्वारा हुलाक कार्यालय, सुन्धारानजिक रहेको राष्ट्र बैंकको टक्सार कार्यालय भत्काइनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वको काठमाडौं मल समेत भत्काउने योजनामा प्राधिकरण छ ।
३ वर्ष ८ महिना अघि ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गरे अबको ठ्याक्कै २ वर्षपछि धरहराले आफ्नो पुरानै विरासत पाउनेछ । धरहरा पुरानै स्वरुपको तर, अत्याधुनिक बन्नेछ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्टदेखि पार्किङसम्मका विविध सुविधा हुनेछन् । अब बन्ने धरहराको भुईं तलामा पुनर्निर्माणका क्रमका तस्वीरहरु संग्रहित गरेर प्रदर्शनीमा राख्ने योजना छ । अक्टोबर २०२० भित्रै धरहराको निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । गत १० सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणले टेण्डर आहृवान गरेर जीआईईटीसी रमन जेभीलाई धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको हो । सम्झौता अनुसार रमन जेभीले १० अक्टोबरदेखि काम थाल्ने भनिएपनि २१ दिन ढिलोगरी निर्माणस्थलमा प्रोटेक्सन पालिङ अर्थात छेकबार गर्ने लगायतका काम थालेको थियो ।
टेलिकमको अण्डरग्राउण्ड फाइबर, खानेपानीका पाइप विद्युतका तार परिसर क्षेत्रमा परेकाले ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । भत्किएको धरहराको ठूटोमाथि छत राखेर चारैतिरबाट १० मिलिमिटरको टेम्परग्लास सिसाले घेरेर संरक्षण गर्ने योजना छ । धरहरा निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री र त्यहाँबाट निस्कने फोहोरलाई टुँडिखेलको दक्षिण भागमा व्यवस्थापन गर्न ठाउँ छुट्याइएको छ । रमन जेभीले ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार २४० रुपैयाँमा यो ठेक्का पाएको हो । अब बन्ने धरहरा बाहिरबाट ११ तला र भित्रबाट २२ तलाको हुनेछ भने टुप्पोको गजुरहित ७९ दशमलब २ मिटर ९२५७.४ फिट अग्लो हुनेछ । विसं १९९० सालको भुइँचालोअघि धरहरा ११ तलाको थियो । भुइँचालोले २ तला भत्किएपछि ९ तलामा सीमित भएको थियो ।
२९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने धरहरा परिसरमा म्यूजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैंचा, रेष्टुराँ, पार्किङ लगायतका सुविधाहरु हुनेछन् । धरहरामा र्भयाङ चढेर होइन, लिफ्टबाट ‘टप’ मा पुग्ने व्यवस्था हुनेछ । धरहरामा चढ्ने र ओर्लिने दुईतर्फी लिफ्ट हुनेछ । लिफ्ट एक पटकमा १० जनासम्म चढ्न सक्ने हुने भनिएको छ ।
लिफ्टबाट धरहराको भित्री भागको २०औं तलासम्म पुग्न सकिनेछ र त्यहीँबाट काठमाडौं अवलोकन गर्ने व्यवस्था हुनेछ । २० औं तलाको उक्त अवलोकन कक्षमा एक पटकमा ५४ जनासम्म अटाउनेछन् । धरहरा बाहिरबाट हेर्दा पुरानैजस्तो देखिए पनि भित्री भाग आधुनिक हुनेछ । धरहरामा दुई तला अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट हुने छ । बेसमेन्टमा तलमाथि गर्नका लागि लिफ्टको व्यवस्था गरिने छ । बेसमेन्टमा बाहिरको प्रकाश प्राकृतिक तवरले भित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । धरहरा परिसरमा दुई तलाको आकर्षक म्युजियम हुनेछ । म्युजियममा पुराना सिक्का र सिक्का छाप्ने मेसिनहरु प्रदर्शनीमा राखिने छ । म्युजियम जाने बाटोमा वाटर फाउन्टेन हुनेछ । वाटर फाउन्टेन ५० फिट अग्लो हुनेछ । नयाँ बन्ने धरहरा अपांगमैत्रीसमेत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहरा छिर्ने्बित्तिकै आकर्षक बँगैचा आउने छ । धरहरा परिसरमा लाइब्रेरी, रेष्टुरेन्टलगायतका सुविधाहरु पनि हुनेछन् । धरहरा परिसरमा तीनतले पार्किङ हुने छ । पार्किङमा ३४७ वटा सवारी र ७०० वटासम्म मोटरसाइकल अट्ने बताइएको छ । पर्यटकका लागि अब बन्ने धरहरा काठमाडौंको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
Previous article Kerala’s Muslim Education Society bans burqas in its colleges
Next article Tomato prices surge from Rs 15 to Rs 60 per kg in one week
Kerala’s Muslim Education Society bans burqas in its colleges
Tomato prices surge from Rs 15 to Rs 60 per kg in one week
सागमा पदक जित्ने खेलाडी पुरस्कृत